ယုံကြည်ရတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် လူတွေ ပိုက်ဆံတစ်ကယ်ပေးလိုကြသလား?
ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်အဖြစ် တိကျသေချာတဲ့ အဖြေရှာမရသေးဘဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ နည်းပညာတိုးတက်လာတဲ့ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ သတင်းတုတွေကြောင့် လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်နေကြရတာ အမှန်ပါပဲ။
နည်းပညာခေတ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၊ အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်မှု ကျယ်ပြန့်လာတဲ့ အွန်လိုင်းခေတ် လူသားတွေအတွက်လည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုး နေရာအစုံစုံကနေ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပေါများပိုလျှံစွာ ရရှိနေကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ လွှင့်တင်ဖော်ပြနေကြတဲ့ သတင်းတွေထဲမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိ သတင်းအမှားတွေ၊ သတင်းအတုတွေက သတင်းပရိသတ်အတွက် စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အွန်လိုင်းသတင်းပရိသတ်တွေက နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းပြီ ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေကို ပိုမို အားထားလာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေက အွန်လိုင်းပေါ်က သတင်းတုတွေတိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ လုံလောက်ထိရောက်တဲ့ အခြေအနေလို့ မဆိုသာနိုင်သေးပါဘူး။ နည်းပညာတိုးတက်မှုအရ မိုဘိုင်းအင်တာနက်နဲ့ စမတ်ဖုန်းများကနေ သတင်းတွေဖတ်ရှုနိုင်မှု၊ အွန်လိုင်းသတင်းတုတွေကြောင့် သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် ပရိသတ်ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာမှုတွေက သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
အပြောင်းအလဲ၊ စိန်ခေါ်မှုနဲ့ ဝင်ငွေကျဆင်းမှု
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကာလမှာ မိုဘိုင်းအင်တာနက်နဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက ပရိသတ်ထံ သတင်းပို့ဆောင်မှုစနစ်ကို အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်စေခဲ့ရာ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်း အများအပြားရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပြီး ဝင်ငွေကျဆင်းမှု၊ ဝန်ထမ်းလျှော့ချရမှုနဲ့ လုပ်ငန်းလွှဲပြောင်းရောင်းချရမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ယခင်က ပုံနှိပ်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း အစရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာထုတ်ကုန်တွေမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြတဲ့ ကြော်ငြာအများစုကလည်း Facebook, Google, Amazon ကဲ့သို့ အမေရိကန် နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေထံမှာ ရွှေ့ပြောင်းကြော်ငြာလာခဲ့တာကြောင့် ပုံနှိပ်မီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဝင်ငွေကျဆင်းမှုတွေ သိသိသာသာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့မှာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေထက်ဝက်ကလည်း သတင်းတွေကို အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုသိရှိနိုင်နေကြပါပြီ။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းစွာ ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းတွေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်က တိကျသေချာတဲ့ အဖြေရှာမရသေးဘဲ ရှိနေပြန်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကတော့ ယုံကြည်ရတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် ဘယ်သူတွေက အခကြေးငွေပေးမှာလဲ? လူတွေက ယုံကြည်ရတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် အမှန်တစ်ကယ် အခကြေးငွေပေးလိုကြသလား? ဆိုတာပါပဲ။
အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ Reuters Institute for the Study of Journalism က လတ်တလော ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ နှစ်အလိုက် Digital News Report အစီရင်ခံစာမှာတော့ လူအများစုက အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် ပိုက်ဆံပေးကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်အတွင်းမှာလည်း အွန်လိုင်းသတင်းကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ဖတ်ရှုချင်တဲ့ လူဦးရေက အနည်းငယ်မျှသာ တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် ပိုက်ဆံပေးသူတွေကလည်း လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းနေရမှုနဲ့ မတူညီတဲ့ ဝန်ဆောင်ခကြေးများ ပေးသွင်းခိုင်းမှုတွေကို မနှစ်မြို့ကျဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံ ၃၈ နိုင်ငံမှ လူဦးရေ ၇၅,၀၀၀ ပါဝင်တဲ့ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကို အခြေခံပြီး ယခုနှစ် Digital News Report ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ နိုင်ငံအားလုံးမှ စစ်တမ်းမှာပါဝင်သူ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းက ၎င်းတို့ဟာ သတင်းမှား၊ သတင်းတုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိကြတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ စစ်တမ်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေအနက် အများအပြားမှာတော့ အစိုးရတွေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေက တန်ပြန်တိုက်ဖျက်နေသည့်တိုင် သတင်းမှား၊ သတင်းတုတွေ ပျံ့နှံ့မှုက တရိပ်ရပ်တိုးလာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက 'အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘယ်ဟာက အစစ်အမှန်၊ ဘယ်ဟာက အတုအယောင်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း' ပြောခဲ့ကြပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်မှာတော့ ထိုသို့ ပြောဆိုသူ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Digital News Report အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားမှုအရ စစ်တမ်းမှာပါဝင်ခဲ့သူ လေးပုံတစ်ပုံနီးပါးက နာမည်ဂုဏ်သတင်းကောင်းတဲ့ သတင်းဌာနတွေကို ပိုရွေးချယ်လာကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းက ထိုသို့ ရွေးချယ်လာကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ သတင်းပရိသတ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ "ဟိုးအရင်ကတည်းက ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အချိန်ကာလရှည်ကြာ ရှိနေခဲ့တဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေက ယုံကြည်ရတယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်" လို့ သူမရဲ့အမြင်ကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုနဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလားရာ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သတင်းတွေအပေါ် ယုံကြည်မှုကတော့ ကျဆင်းလာနေပြီး ပြင်သစ်မှာ သိသိသာသာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က သတင်းတွေအပေါ် ယုံကြည်မှု ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာမှာ ယခုနှစ်မှာတော့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ သတင်းအပေါ် ယုံကြည်မှုက ဆိုးရွားစွာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ၉ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ အွန်လိုင်းသတင်းအတွက် ပိုက်ဆံပေးဖတ်ရှုမှုကတော့ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တည်ငြိမ်နေပြီး ဗြိတိန်မှာတော့ အွန်လိုင်းသတင်းကို ပိုက်ဆံပေးဖတ်ရှုမှု ၉ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာရှိတယ်လို့ Digital News Report အစီရင်ခံစာက ပြောပါတယ်။ သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေက လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးဖြင့် ပိုက်ဆံပေးဖတ်ရှုသူ များပြားလာစေရန် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ချဉ်းကပ်ကြိုးပမ်းနေကြပေမဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို မရနိုင်ကြသေးပါဘူး။
Reuters Institute က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အစီရင်ခံစာအရ လူတွေက သတင်းထက် ဖျော်ဖြေရေးတွေဖြစ်တဲ့ Netflix သို့မဟုတ် Spotify ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကို လစဉ်ကြေးပေးပြီး ရယူလိုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကယ်၍ လစဉ်ကြေးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာ ရယူနိုင်မယ်ဆိုပါက ဘာကိုရွေးမလဲလို့ စစ်တမ်းမှာပါဝင်သူတွေကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းက ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု၊ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းက တေးသီချင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ၇ ရာခိုင်နှုန်းကသာ သတင်းဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ကောင်းစွာလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ The New York Times, Wall Street Journal နဲ့ Washington Post သတင်းဌာနတွေ အခြေစိုက်ကြတဲ့ အမေရိကန်မှာ အွန်လိုင်းသတင်းကို ပိုက်ဆံပေးဖတ်ရှုကြသူတွေဟာ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတွေနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုနှစ် Digital News Report အစီရင်ခံစာအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ ခရီးကြမ်းကို ဖြတ်သန်းကြရအုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါကြောင်း ...။